ဒေါင်း တမန်​ ​ဒေါင်းအလံ
​ကျောင်းနံရံ ပီပီ စိုက်​ပြီ​ကွဲ့
သမိုင်းမှာ လိုချိန်​ ​ရောက်​​လေတိုင်း
​ဒေါင်း​သွေး​တွေ နီ ၊၊
သပိတ်​ သပိတ်​ ​မှောက်​ ​မှောက်​။
၁၅ နိုဝင်​ဘာ ၂၀၁၅
photo downloaded from facebook.
Posted by မမသီရိ at 11/15/2014 04:27:00 PM
နိုဝင်ဘာမိုးရေစက်တွေဟာ ပြတင်းဘေးက တမာရွက်တွေပေါ်မှာ တွဲသီလို့..
မောင့် ထံ အမြန်ပြန်လာပါ သတင်းစကားဟာ
မာယာ မုန်းတိုင်းကြား ဖတ်သီဖတ်သီ နေခြည်ကြာသို့ လီဆယ်လို့ ..
ငါ့ ခြေသည်းတွေ ပေါ်မှာ..
ရွှေရောင် ပန်းပွင့်လေးများ အားကူညီ လို့ ရှေ့ဆီသို့ ..
ငါ ဖွင့်ရ မဲ့ တံခါးတွေ အကုန်လုံး သော့ အသစ် လဲ လိုက်ပြီးပြီ... I HATE YOU! OPPS!!!!!
၀၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄
Posted by မမသီရိ at 11/06/2014 06:06:00 PM
If I were Super Alien
လက်ညှိုးညွှန်ရာ ရေများ ဖြစ်လို့ကတော့
မြို့လယ်ကောင် ဆူးလေဘုရားနား ပတ်လည်က
ဟိုအပြာရောင် တိုက်မြင့်မြင့်ကြီးတွေ ဖြိုချ
လမ်းလျှောက်မရတဲ့ ပလက်ဖောင်းပေါ်က ဈေးဗန်းတွေ မှုတ်ထုတ်
ကမ္ဘာကျော် တွေ ဒူးထောက်ရသူများ
ကမ်းနားလမ်း အမ်ပီအေ ရှေ့က
ကျက်သရေယုတ် လဲလျောင်း အဲဒီအလောင်းကြီးသာ ကော်ထုတ်ချင်..။
မှတ်ချက်။ ။ ရေစုန်မျော ရန်ကုန်
၂၂ သြဂုတ် ၂၀၁၄
Posted by မမသီရိ at 8/22/2014 06:33:00 PM
ဒီကမ္ဘာ ။။ ငြိမ်းချမ်းအောင်လို့ တဲ့..
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မငြိမ်းချမ်းစွာ အစည်းအဝေးတွေ မရပ်မနား
တိုက်အပြိုအပျက်ပုံ တွေ အောက်မှာ..
တနေ့တခြား တိုးပွားလာသော ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာ..
သားပျောက်မိခင်တွေ သောက ကျိုးပေါက်နေသရွေ့တော့
မုဆိုးမ အရေအတွက်စာရင်းစာရွက်တွေ မြင့်မြင့်လာမှတော့
အပြစ်မဲ့သူတွေရဲ့ သွေးတွေ ချောင်းစီးမရပ်နိုင်သမျှတော့
ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ တောင်တော နက်နက်ဆီ တိုးဝင်သွားပြီး
အတ္တ တွေ မာနတွေ ဖောက်ပြားသော မောဟတွေ စင်ပေါ်တက် မီးရောင်လက်တဲ့အခါ
စိတ်ချလက်ချ အိပ်စက် မရတာ ကြာလာ
ယဉ်ကျေးတဲ့ ခေတ်ကြီး လို့လဲပြောကြသေး
အန်းမ်ဘုရ်ှတွေ ထောင်သောင်းချီ ပစ်ကြသေး
ပါးစပ်က ဘုရား ဘုရား နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး
လက်မှာ ဓါး တစ်ဝင့်ဝင့်နဲ့ ထီမထင် လူသတ်ဝန်မလေး
အချင်း မိုင် တစ်ထောင်လောက်နဲ့ ဥက္ကာခဲရေ
အလင်းနှစ် မိုင်တစ်သန်း နှုန်း
အမြန်ဆုံး ပေါ့ .. လမ်းမှားလို့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ်
၀င်သာ တိုက်ခဲ့လိုက်ပါ ..
ဘုရားသခင်ပေါင်း များစွာ မေ့လျော့ ခံရတဲ့ ဒီမြေကမ္ဘာ ။
၁၂ သြဂုတ် ၂၀၁၄
Posted by မမသီရိ at 8/15/2014 12:53:00 PM
နေရောင်လဲ့လဲ့ ပြန်မြင်ရပြီ ကွဲ့ . တို့မြို့မှာ..
ကလေး ရေ.. တို့တတွေ တွင်းအောင်း သတ္တ၀ါလေးတွေ ဖြစ်ခဲ့တာ
သီတင်းပတ် အတော်ကြာ ခဲ့ပေါ့..
ကဲ လာ... မြက်ပင်တိပ်ဖျား
အဲဒီ ကမူ ချောချော .. သောသော ညံ အောင် ပြေးဆင်းကြစို့ရဲ့
ပွင့်ချင်နေတဲ့ ... နှင်းဆီ ၀ါဝါ တွေ အနားမှာ....။
၁၁ သြဂုတ် ၂၀၁၄
Posted by မမသီရိ at 8/11/2014 02:05:00 PM